Sida loo qaabeeyo timo gaagaaban oo kacsan | Ragga Stylish
Waan ognahay inaanaan jeclayn xiriirada, waxaan marwalba jecel nahay inaan u labisano si caadi ah oo aan xiro timo gaagaaban oo aan waqti dheer ku qaadaneynin hagaajintiisa, ama ku xirnaan badan. Waxaan marwalba dooran karnaa inaan xoqno oo aan uxirno si adag oo hagaagsan, ama sidee kiiska loo abuuraa qaab jajaban taas oo xambaarsan astaanteena shakhsiyadeed isla markaana qeexaysa aqoonsigeenna.
Xirashada timo jilicsan waad calaamadeyn kartaa qaabkaas aan jecelnahay inaan xirano, Isku mid maaha inaad uga tagto sidaad sariirta uga kacday ama aad ugu ogolaato inay ku dheesho xawaareheeda, in ka badan inaad xirto muuqaal aan rasmi ahayn laakiin leh habdhaqan wanaagsan, dabacsan oo hagaagsan.
Ku helitaanka timahan foosha xun ee ragga waa qaab daryeel la'aan laakiin sidoo kale qaab dabiici ah, waa arrin ah qaadida tillaabooyin yar oo fudud si aad u awoodo inaad aqoonsato qaabka ugu habboon wajigaaga iyo qaab nololeedkaaga.
1 Waa maxay timo goynta ay tahay inaad xirato?
2 Talooyin ka hor intaadan siinin muuqaalkaas jiidashada badan
3 Timaha qurxinta "cutka caadiga ah"
4 Timaha xiiran
5 Xaragada timaha leh timo jilicsan
6 Timo gaaban laakiin ka dheer kor
Waa maxay timo goynta ay tahay inaad xirato?
Timo jariddu waa qodob muhiim u ah qaabeynta iyo shakhsiyadda nin. Qaababka timaha ee la qaadan karo wali waa dhinac dad badani dayaceen oo aan dan ka lahayn sida ay dib ugu soo noolaan karaan iyadoo kuxiran qaabka wejigooda.
Si kastaba ha noqotee, timo jariddu waa inay noqotaa wax had iyo jeer kaa dhiga inaad gariiriso in aad jeceshahay, taasi waa mid fudud oo raaxo leh oo aan ka dhalan culeys markay tahay ilaalinteeda. Oo maxaa ku saabsan timaha jilicsan?
Ragga timaha qalooca ma leh cilladahaas tirada badan sanado kahor, waxay ku xukumi karaan curlsyadooda bedelka weyn ee alaabada timaha ee suuqa kujira. Timaha noocan ah waxaan sidoo kale ku ciyaari karnaa alaabada iyo ku xukumaan iyaga qaab caasinimo ah oo cabiran.
Sannadkan, timaha caadiga ah ee leh dhexda dhexe ayaa abuuri doona isbeddel, iyo sidoo kale timo dhinaca dhinaca, gaar ahaan timaha ruxruxa. Qaabka loo yaqaan 'hipster' ayaa sidoo kale ka mid noqon doona timaha timaha ee sanadkan aan dhinac looga dhaafi doonin. In kasta oo qaabkiisu uusan ku dhex dhicin tima jareheenna la nacay, laakiin si wanaagsan loo xardhay.
Talooyin ka hor intaadan siinin muuqaalkaas jiidashada badan
Daryeelka saxda ah ee timaha caafimaadka qaba marwalba waa muhiim waana maydh wanaagsan oo leh shey xirfad leh ayaa lagama maarmaan ah, hadday suurtagal tahay cusbo la'aan. Muhiim maahan inaad dhaqdo timahaaga maalin kasta, tani waxay ka dhigeysaa mid aan toosneyn oo fidsan. Sidan ayaad si fiican u abuuri doontaa saliidaha dabiiciga ah ee kuu gaarka ah, taasi waxay ku siin doontaa mug badan waxayna kaa caawin doontaa inaad si fiican u calaamadeysid qaababkaaga.
Alaabtu inay awood u yeelato inay hagaajiso timaha iyo inay qaab u yeelato waa inay ahaato mid ku filan. Waa inay gacan ka geystaan ​​sidii loo siin lahaa dabeecadaas iyo mugga si ay wax badan u sii dheeraato. Waayo, waa lagama maarmaan in timaha lagu hagaajiyo alaab tayo leh, Waxaan uga tageynaa dhaldhalaalka dhalaalaya ama maqaarka gacmaheena.
Timaha qurxinta "cutka caadiga ah"
Waa timo gaaban, midka nolosha oo dhan waana la hubin karaa taas Saamaynta la jiiday ayaa fududaan doonta in la qabto. Waxaan qaadan karnaa xoogaa shamac ama jel ah oo leh saameyn jilicsan oo udhaxeysa faraha gacanta. Ka dib ku dhaji xarig adoo adeegsanaya xarig timaha ah, adigoo kala bixinaya xargaha qaab istiraatiiji ah oo wax lagu barto.
Waa timaha la duudsiiyey, aadna looga xiiray dhinacyada oo xoogaa dheer xaga sare. Waxaan sameynaa farsamo la mid ah talaabooyinkii hore, waxaan wax yar ka soo saareynaa wax soo saarkeena gacmaha ka dibna waxaan ku faafinaa timaha, qufulka qufulka iyo qaabeynta qaab dhismeed aan caadi aheyn.
Xaragada timaha leh timo jilicsan
Timaha curly shaki kuma jiro fowdo, laakiin wax walba waa la xakameynayaa. Wax macno ah ma leh haddii aad leedahay iyaga oo ruxruxaya, aad u qalloocan, aad u fiican ama aad u adag in la barto, waa inaad ku dhiirantaa inaad tijaabiso waxyaabo cusub oo kala duwan. Layliska markasta waxaan helnaa natiijada aan jecel nahay.
Talo ahaan, waxaad badanaa doorataa inaad timahaaga u qalajiso si dabiici ah ama caawimaad qalajiyaha. Mar dambe waxaan ku dalbaneynaa sheyga gacmaheena dhexdooda oo waxaan ku tuujinaynaa timaha si loo siiyo qaab caasi ah. Markaa ugu dambayntii waad ku dhammayn kartaa xoogaa yar timo-engejiye.
Timo gaaban laakiin ka dheer kor
Muuqaalkan way fududahay in la bixiyo muuqaalkaas jiidashada badan. Waa timahaas timaha oo timo gaaban dhinacyada ku leh oo aad uga sii dheeraanaya xagga sare. Qaabkan waxaad ku calaamadeyn kartaa qaabkaaga oo waxaad ku heli kartaa muuqaalkaas mid aad u fudud in la burburiyo. Waxaad marinaysaa wax-soosaarkaaga ama sheyga hagaajinta gacmahaaga dhexdooda oo waxaad ugu oggolaan kartaa inuu ku jajabiyo xarrago.
Kuwa idinka mid ah oo timo dhaadheer leh, laakiin iyadoo gunta dhinacna ay sidoo kale noqon doonto mid ku habboon. Waxaan kululeynaa shamaca inta udhaxeysa gacmaheena waxaanan siineynaa qaab iyo dhaqdhaqaaq ilaa aan ka helno qaabka saxda ah.
Hadaad horeyba uheshay si cad, waa caqabad wanaagsan inaad qaabeyso booskeena boos la'aan xeerar. Taas bedelkeeda, haddii qaabkaagu ku saleysan yahay inaad yeelato nooc ka mid ah timaha gaarka ah ama aad u baahan tahay ama nooc ka mid ah timo qaas ah oo gaar ah, waxaad ka akhrisan kartaa maqaallo isku mid ah qaybtayada noocyada timaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sidee loo qaabeeyaa timo gaagaaban oo jaban